သိပံ္ပပညာရှင်များရဲ့လေ့လာမှုအရ ချစ်သူထားခြင်းက သင့်ကိုဝဖြိုးစေနိုင် – Trend.com.mm
Posted on March 19, 2018 April 10, 2019 by Wint
Single ဘဝနဲ့ဆိုရင် သင်ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ဘော်ဒီဝိတ်ကိုထိန်းထားနိုင်မယ်တဲ့ .. လေ့လာမှုများအရ …
Relationship က အမှန်တကယ် ဝိတ်တက်စေနိုင်ပါတယ်။ သြစတေးလျ Queensland တက္ကသိုလ်မှ သုတေသီများရဲ့လူပေါင်း ၁၅ဝဝဝနဲ့ပတ်သတ်တဲ့၁ဝနှစ်တာ အချက်လက်များအရ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ စုံတွဲအများစုဟာ single တွေထက် ပျှမ်းမျှ၅.၈ ကီလိုဂရမ် ဝိတ်တက်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။လူတစ်ယောက်ဟာ ပုံမှန်ဆို တစ်နှစ်ကို ဝိတ်က ၁.၈ ကီလိုဂရမ်သာတက်သင့်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
တကယ်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့အခါ လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်မလုပ်၊ Gym လည်းမသွားတော့တာဟာ အတူတူအိပ်ရမယ့်သူရှိလာသလို၊ လေ့ကျင့်ခန်းထက် ပိုပျော်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေရှိလာလို့ပါပဲ။ ကိုယ်တိုင်တောင်မသိလိုက်ခင်မှာပဲ… Boom! (၁ဝ)ပေါင်လောက်က တက်သွားပါပြီ။ ရှက်စရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ချစ်နေရလို့ စိတ်ချမ်းသာတယ်။ စိတ်ချမ်းသာတော့ စားဝင်၊ အိပ်ပျော်တယ်။ ဒီတော့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ကျန်းမာ ၀ဖြိုးလာတယ်။ ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့ကအဓိကမလား။
Single တွေနဲ့ယှဉ်ရင် ချစ်သူရည်စားရှိသူတွေက ကျန်းမာတဲ့အမူကျင့်တွေနဲ့ ပြည့်စုံပါတယ်။ယောက်ျားလေးတွေဆိုလည်း ဆေးလိပ်သောက်တာ လျော့လာမယ်။ အမြန်ရအစားသောက်တွေ သိပ်မစားတော့ဘူး။ မိန်းကလေးတွေဆို သစ်သီးနဲ့ အရွက်တွေပိုစားလာမယ်။ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာနဲ့ စားချင်တာ စားနေရတဲ့အတွက် ဘဝကြီးက relationship တွေအတွက်တော့ သာသာယာယာပါပဲ။
စိတ်ကျေနပ်မှုဟာလည်း ဝိတ်တက်ခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိနေတယ်လို့ Dallas မှ SouthernMethodist တက္ကသိုလ်မှ သုတေသီ ခေါင်းဆောင် Andrea Meltzer က ဆိုပါတယ်။ ကိုယ်တွဲနေတဲ့လူနဲ့နေရတာ စိတ်ချမ်းသာလေ ဖက်တီးလေးဖြစ်လာလေပါပဲ။
တကယ်လို့ စာဖတ်သူဟာ လက်ရှိမှာ ချစ်သူရှိနေပြီး ဝိတ်လည်းတက်လာနေပြီဆိုရင် ဝမ်းမနည်းပါနဲ့။ ဒီလက္ခဏာက သင်ဟာ ပျော်ရွှင်နေတဲ့လူသားတစ်ယောက်ဆိုတာကိုပြလိုက်တာပါပဲ။
Single ဘဝနဲ့ဆိုရငျ သငျဟာ ကိုယျ့ရဲ့ဘျောဒီဝိတျကိုထိနျးထားနိုငျမယျတဲ့ .. လလေ့ာမှုမြားအရ …
Relationship က အမှနျတကယျ ဝိတျတကျစနေိုငျပါတယျ။ သွစတေးလြ Queensland တက်ကသိုလျမှ သုတသေီမြားရဲ့လူပေါငျး ၁၅ဝဝဝနဲ့ပတျသတျတဲ့၁ဝနှဈတာ အခကျြလကျမြားအရ ပြျောရှငျနတေဲ့ စုံတှဲအမြားစုဟာ single တှထေကျ ပြှမျးမြှ၅.၈ ကီလိုဂရမျ ဝိတျတကျနိုငျတယျလို့သိရပါတယျ။လူတဈယောကျဟာ ပုံမှနျဆို တဈနှဈကို ဝိတျက ၁.၈ ကီလိုဂရမျသာတကျသငျ့ကွောငျး ဖျောပွထားပါတယျ။
တကယျခဈြရတဲ့သူနဲ့ တှဆေုံ့တဲ့အခါ လကေ့ငျြ့ခနျးပုံမှနျမလုပျ၊ Gym လညျးမသှားတော့တာဟာ အတူတူအိပျရမယျ့သူရှိလာသလို၊ လကေ့ငျြ့ခနျးထကျ ပိုပြျောစရာကောငျးတဲ့အရာတှရှေိလာလို့ပါပဲ။ ကိုယျတိုငျတောငျမသိလိုကျခငျမှာပဲ… Boom! (၁ဝ)ပေါငျလောကျက တကျသှားပါပွီ။ ရှကျစရာတော့မဟုတျပါဘူး။ ခဈြနရေလို့ စိတျခမျြးသာတယျ။ စိတျခမျြးသာတော့ စားဝငျ၊ အိပျပြျောတယျ။ ဒီတော့ ခန်ဓာကိုယျဟာ ကနျြးမာ ဝဖွိုးလာတယျ။ ကနျြးမာရေးကောငျးဖို့ကအဓိကမလား။
Single တှနေဲ့ယှဉျရငျ ခဈြသူရညျစားရှိသူတှကေ ကနျြးမာတဲ့အမူကငျြ့တှနေဲ့ ပွညျ့စုံပါတယျ။ယောကျြားလေးတှဆေိုလညျး ဆေးလိပျသောကျတာ လြော့လာမယျ။ အမွနျရအစားသောကျတှေ သိပျမစားတော့ဘူး။ မိနျးကလေးတှဆေို သဈသီးနဲ့ အရှကျတှပေိုစားလာမယျ။ စိတျခမျြးသာ ကိုယျကနျြးမာနဲ့ စားခငျြတာ စားနရေတဲ့အတှကျ ဘဝကွီးက relationship တှအေတှကျတော့ သာသာယာယာပါပဲ။
စိတျကနြေပျမှုဟာလညျး ဝိတျတကျခွငျးနဲ့ ဆကျစပျမှုရှိနတေယျလို့ Dallas မှ SouthernMethodist တက်ကသိုလျမှ သုတသေီ ခေါငျးဆောငျ Andrea Meltzer က ဆိုပါတယျ။ ကိုယျတှဲနတေဲ့လူနဲ့နရေတာ စိတျခမျြးသာလေ ဖကျတီးလေးဖွဈလာလပေါပဲ။
တကယျလို့ စာဖတျသူဟာ လကျရှိမှာ ခဈြသူရှိနပွေီး ဝိတျလညျးတကျလာနပွေီဆိုရငျ ဝမျးမနညျးပါနဲ့။ ဒီလက်ခဏာက သငျဟာ ပြျောရှငျနတေဲ့လူသားတဈယောကျဆိုတာကိုပွလိုကျတာပါပဲ။